RW Khayre oo kormeeray Xarumo dowladeed, lana damaashaaday shacab ku sugnaa Xeebta Liido – Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya
Waxaa la qoray March 13, 2018 March 27, 2018
RW Khayre oo kormeeray Xarumo dowladeed, lana damaashaaday shacab ku sugnaa Xeebta Liido
MUQDISHO —Raisul Wasaaraha Xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta kormeer shaqo ku tegay qaar ka mid ah Xarumaha dowlada ee Magaalada Muqdisho, isagoo dhinaca kale galabta la damaashaaday dadweyne ku sugnaa Xeebta Liido.
Mudane Xasan Cali Khayre ayaa meelaha uu booqday waxaa ka mid ah xarunta Wasaaradda arrimaha dibeda Soomaaliya, waxaana halkaas ku soo dhoweeyey Wasiirka Wasaaradaas iyo qaar ka mid ah howlwadeenada ka howlgala xarunteeda.
Dhankiisa, Raisul Wasaare Khayre ayaa ku amaanay Masuuliyiinta iyo shaqaalaha Wasaaradda arrimaha dibeda sida hufan ee ay Waajibaadkooda u gudanayaan isagoo kula dardaarmay iney sii xoojiyaan dedaalkooda.
Xarunta Wasaarada Maaliyada Xukuumada Soomaaliya ayaa ka mid ah Xarumaha uu booqday Raisul Wasaare Khayre, waxaana halkaas si diiran ugu soo dhoweeyey Masuuliyiinta Wasaaradda isagoo kormeeray qeybaha ay kooban tahay, wuxuuna u kuur galay sida ay socdaan howlaha Wasaarada oo ka mid ah kuwa ugu muhiimsan ee udub dhexaadka u ah dowlada Soomaaliya.
Sidoo kale, Ra’isul Wasaare Khayre iyo masuuliyiinta la socotay ayaa galabta booqday Hotel Dolphin oo ah hotel casri ah oo dhowaan laga dhisay Xeebta Liido ee Magaalada Muqdisho isagoo Caffe la cabay, lana sheekeystay qaar ka mid ah dadkii ku sugnaa hotelka oo si weyn u xiiseynayey la kulankiisa, kuna faraxsaanaa.
Kormeerka joogtada ah iyo booqashada raisul Wasaaraha xukuumada Somalia ku sameeyo xarumaha heyadaha dowlada iyo goobaha bulshada ayaa muujinaya sida Xukuumadu uga go’an tahay dardar gelinta gelinta howlaha dowlada iyo dareensiinta bulshada in madaxdoodu yihiin kuwo aan ka fogeyn oo had iyo jeer ka warqaba xaaladaha ay ku sugan yihiin.
Qormadii HoreHore Dowlada Somalia oo beesha caalamka horgeysay qorshe ciidamada XDS ku buuxinayaan kaalinta AMISOM
Qormada XigtaKu Xiga Raisul Wasaare Khayre oo Guddoomiyey kulankii Golaha Wasiirada oo looga hadlay qodobo badan